Bayakwazi ukufaka iinguqulelo ezintathu ezahlukeneyo ze-iOS kwi-iPad 2 | IPhone iindaba
Iindaba ze-IPad | | iOS 5, iOS 6, iOS 7
Abasebenzisi beMac banethamsanqa lokukwazi ukwenza izahlulelo ezahlukeneyo kwiikhompyuter zethu ngeendlela ezahlukeneyo zokusebenza ngokulula. Ukuqala ngeWindows okanye iMac ngumba wokucofa iqhosha xa uqala ikhompyuter yethu, esivumela ukuba sonwabele zonke izibonelelo esizibonelelwa ziinkqubo zombini ezisebenzayo. Kudala basebenza ekubeni bakwazi ukwenza into efanayo kwi-iPhone kunye ne-iPad, kwaye i-hacker, iWinocm, iphumelele. Ukwazile ukufaka iinguqulelo ezintathu ezahlukeneyo ze-iOS (i-iOS 5, 6 kunye no-7) kwi-iPad 2, kwaye ube nakho ukuqala isixhobo kuyo nganye. Sikubonisa yona kwividiyo.
I-Winocm ikwangumcimi ofanayo osandula ukubonisa ividiyo nge-iPhone 4 ene-Jailbreak eyenziwe ngenguqulo ye-7.1 ye-iOS efakiweyo, kunye ne-hacker efanayo ethethe kakubi nge-Jailbreak, isithi imele umngcipheko wokhuseleko kunye nokwehla kozinzo. yezixhobo ezazicaphukisa kakhulu. Kukwanjalo isigebenga esifanayo esiza kujoyina iApple kungekudala, mhlawumbi inkcazo egqibeleleyo yala magama mabi malunga nokusetyenziswa kweJailbreak kunye neCydia. Ukuba kuko konke oku songeza amagama omgculeli ahamba nevidiyo yakhe, sinokuqiniseka ukuba asizukuwubona lo msebenzi "weebhutsi ezintathu" owenziwe esidlangalaleni ukuze sikwazi ukuwusebenzisa:
Ukukhutshwa kwiminyaka esi-7…?
"Qalisa kwiminyaka esi-7?". Usizi, kuba amathuba okuba ukhethe ukukhetha iinguqulelo ezahlukeneyo ze-iOS anokubonelela zininzi: inguqulelo esemthethweni, ngaphandle kokuqhekeka kwejele, kunye nenye inguqulelo eyenziwe ngeJailbreak. Njengoko i-winocm isitsho, Kwakungekho mfuneko yokuba iJailbreak okanye isebenzise i-SHSH yeenguqulelo ezindala, ke ukufakwa kweefirmwares ezingekasayinwa yiApple nayo iyakuba yinto yokwenyani, into engenakwenzeka kwizixhobo emva kwe-iPhone 3GS kunye ne-4. Siza kuhlala silindile ukuba kungakho iindaba malunga noku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 5 » Bayakwazi ukufaka iinguqulelo ezintathu ezahlukeneyo ze-iOS kwi-iPad 2
Ukusebenza; i-tweak evela kwi-Cydia eyongeza ukubonwa kobuso kwi-iPhone
I-iOS 7.1 bug yenza ukuba iiapps zinyamalale kwiscreen